နွဲ့ယဉ်ဝင်း | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / နွဲ့ယဉ်ဝင်း
Category Archives: နွဲ့ယဉ်ဝင်း
၁။ ဟန်းနီးမွန်းဘမ်ဂျို – နွဲ့ယဉ်ဝင်း ၂။ ချစ်သူအတွက် – သံသာဝင်း ၃။ လမ်း – ဇော်ဝင်းထွဋ် ၄။ ရင်ခုန်တိုင်းချစ်တယ် – ယုမီ ၅။ ရက်စက်သူသို့ – ရှင်ဖုန်း ၆။ စိတ်ကူးယဉ် – ဗေဒါ ၇။ ငါ့အတွက်အချစ်တွေ – ကိုကိုအောင် ၈။ ခဏလေးစောင့်ပါဦး – နွဲ့ယဉ်ဝင်း ၉။ မသေချာတော့ဘူး – သံယာဝင်း ၁၀။ ရင်ထဲမှာ – ယုမီ ၁၁။ လင်းဒါ လင်းဒါ – မျိုးမျိုး
August 9, 2010 MMA နွဲ့ယဉ်ဝင်း အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ရှင်ဖုန်း ဇော်ဝင်းထွဋ် သံသာဝင်း Myanmar Artist2Comments
၁. အဆုံးမဲ့ အချစ် (ကျော်ကိုကိုမြတ် – တင်ဇာမော်) ၂. အကောင်းဆုံး အချစ် (R.ဇာနည် – ခင်သီတာခိုင်) ၃. အလွမ်းညများ (နွဲ့ယဉ်ဝင်း – ကျော်ကိုကိုမြတ်) ၄. မျက်ဝန်းစကား (လာဇရု – ခင်သီတာခိုင်) ၅. ချယ်ရီ (ကျော်ကိုကိုမြတ်) ၆. နှုတ်မဆက်ချင်ဘူး (နွဲ့ယဉ်ဝင်း) ၇. မျက်ရည်မြစ် (Rဇာနည်) ၈. ချစ်မိခဲ့တယ် (လာဇရု – ခင်သီတာခိုင်) ၉ . အိပ်မက်ချစ်သူ (ကျော်ကိုကိုမြတ် – တင်ဇာမော်) ၁၀. တွေးရင်းမော (ခင်သီတာခိုင်) ၁၁. နှုတ်မဆက်ချင်ဘူး (နွဲ့ယဉ်ဝင်း – ဇော်ဇော်) ၁၂. ကျေးလက် အချစ်သီချင်း (လာဇရု – … Continue Reading →
April 24, 2010 mmademo နွဲ့ယဉ်ဝင်း အခွေ (အများ) တင်ဇာမော် New Myanmar Albums Rဇာနည် ဇော်ဇော် ကျော်ကိုကိုမြတ် ခင်သီတာခိုင် လာဇရု 11 Comments
နွဲ့ ယဉ်ဝင်း – ရွှေပင်လယ်
ဒေါ်နွဲ့ ယဉ်ဝင်းရဲ့ (ရွှေပင်လယ်) အယ်ဘမ်ကို အသစ်တစ်ခါပြန်တင်ပေးလိုက်ခြင်းပါ…။ (By mmsong • October 31, 2008) နေ့့စွဲနဲ့ တင်ပေးပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်….၊ Mediafire က ဆွဲလို့ မရဖြစ်နေသော….(သောတရှင်…Rose Link)နဲ့ တေးချစ် သူများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်…။ ၁။ အချစ်ပြန်လာတော့မယ် ၂။ ရွှေပင်လယ် ၃။ သစ္စာချစ်စကား ၄။ ထာဝရမေ့မေတ္တာ ၅။ ကားပြိုင်ပွဲ ၆။ သတိထား ၇။ အခမဲ့ ၈။ ကျွန်မအချစ် နံပါတ်တစ် ၉။ လှိုင်းအထက်ကတံတား ၁၀။ မေ့ဘ၀ရဲ့နေမင်းတစ်ဆူ ၁၁။ ချစ်လူဆိုး ၁၂။ သတို့သမီးအရန် ၁၃။ နှုတ်ဆက်အနမ်း . Download Link : Mediafire Credit … Continue Reading →
February 2, 2009 sayargye နွဲ့ယဉ်ဝင်း အဆိုတော် (မ) Myanmar Artist4Comments